PostPost Plugin loogu talagalay WordPress kor loo qaaday | Martech Zone
PostPost Plugin loogu talagalay WordPress kor loo qaaday
Axad, Juun 14, 2009 Axad, Nofeembar, 16, 2014 Douglas Karr
Qoraalkan waa la joojiyay. Waxaa jira waxyaabo badan oo keyd ah - mid aan ka helay taas oo quruxsan ayaa ah Mawduuca Kadib.
Mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee aan u sameeyay WordPress waa PostPost. Dad badan ayaa jecel inay astaameeyaan bogaggooda, qoraalladooda iyo quudintooda laakiin ku sameeya gudaha tifaftiraha mawduuca wuxuu noqon karaa mid aad u adag. Qalabkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad wax ku qorto ka hor ama ka dib dhejiyada hal bog, dhammaan bogagga, ama quudintaada.
Dhawaan, waxaan ku sameynayay tabarucaad tartan ah iyada oo loo marayo quudintayda iyo qalabku sifiican ayuu ku yimid! Waxaan fariin u dhigay kahor qormadeyda quudinta ee loogu talagalay dadka waawayn inay iigusoo diraan mowduuc gaar ah. E-maylkii ugu horreeyay ee aan helo wuxuu ku guuleystaa $ 125 oo ah rukunka joornaalka .net, oo ah joornaal cajiib ah oo daboolaya tan mowduucyo leh teknoolojiyadda internetka (iyo suuqgeynta qaar). Dhowr maalmood ka dib, waxaan sidoo kale ku dhawaaqay guusha iyada oo loo marayo fiilada!
PostPost waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka faa'iideysato is_feed, waa_page iyo is_sinle shaqooyinka WordPress adigoon fahmin sida loo saxo mawduucaaga ama loo qoro nambarkaaga. Soo Degso PostPost ka yimid Bogga Plugin.
Badanaa ma cusbooneysiiyo sheybaarka illaa intaanan helin tan oo jawaab celin ah astaamaha ama waxaan isku dayayaa inaan barto wax cusub. Xaaladdan oo kale, waxaan doonayay inaan ku daro jQuery kaas oo ku jira WordPress. Ma ahayn wax fudud sida aan moodeeyay, in kastoo. Marka hore, waa inaan kudarsadaa qaab-dhismeedka wax-qabadka leh hawl gaar ah WordPress PHP:
Koodhka jQuery gudahiisa, waxaa jira dhowr isbadal yar oo sidoo kale ah. Caadi ahaan, wicitaan si loo bilaabo jquery badanaa waxaa loo qoraa sidan:
$ (dukumiinti). horeba (shaqo ()
Gudaha WordPress, waxay u egtahay sidan:
jQuery (dukumiinti) .hore (shaqeyn ($)
Kani wuxuu ahaa mashruuc madadaalo leh runtiina waxtar buu ku yimid! Dabcan, waxaan sidoo kale ku daray lambar si aan ugu daabaco qoraalladayda boggeyga maamulka sidoo kale - waa qalab bilaash ah, markaa maxaad ugu dhiirrigelin weyday boggeyga is-dhaafsiga.
Tags: ka dib markii contentka dib markii plugin pluginka dib boostadaboostada postboostada kadibboostada pluginplugin WordPress
Safari 4 Waa la siidaayay - Firebuggishly Great!
Jun 14, 2009 at 6: 07 PM
Haddana sabab kale oo loo jeclaado WordPress. Mahadsanid!
Nov 16, 2014 at 8: 56 AM
sideen u soo dejisan karaa qalabkan "Https://martech.zone/projects/postpost/" boggan ma shaqeynayo
Nov 16, 2014 saacadu markay tahay 12:41 PM
Waxaan joojinay qalabkan. Waxaa jira kuwa badan oo waaweyn oo lagu taageeray keydka - hubi Mawduuca Kadib.